Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka oo Kulan looga hadlayay Howlaha Dastuurka la yeeshay Wasiir ku xigeenka W/Dastuurka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka oo Kulan looga hadlayay Howlaha Dastuurka la yeeshay Wasiir ku xigeenka W/Dastuurka
Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka oo Kulan looga hadlayay Howlaha Dastuurka la yeeshay Wasiir ku xigeenka W/Dastuurka
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay halka ay marayaan hanaanka dib u eegista dastuurka, wada shaqeynta guddiyada dastuurka iyo Wasaaradda dastuurka.
Wasiir ku xigeenka Wasaarada Dastuurka ee Xukuumada Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdi Cilmi ayaa sheegay in Wasaarada Dastuurka ay wado dadaaladii ugu dambeeyay ee dib u eegista loogu sameynayo dastuurka.
“Runtii wasaarada dadaal ayay wadaa, golaha shacabka waxaan ka codsanaya in wasaarada dastuurka iyo guddiyada dhisan inaad kala shaqeysaan howlaha culus ee horyaallo, si loogu guuleysto in dastuur loo dhan yahay aan yeelano”. ayuu yiri wasiir ku xigeenka wasaarada dastuurka.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo kulanka soo xiray ayaa ku dheeraaday muhiimada dastuurka iyo dardar gelinta howlaha dib u eegista.
Guddoomiyaha ayaa wasaarada dastuurka faray iney shaqooyinka ay wadaan sii labada jibaaraan, golaha shacabkana ay usoo gudbiyaan warbixin dhameystiran si waqtiga haray loogu faa’iideysto.
Ugu dambeyn Guddoomiye Mursal ayaa sheegay in guddiga joogtada ee golaha shacabka uu la xisaabtamayo wasaarada dastuurka iyo guddiyada ku howlan dib u eegista dastuurka.